Business Model Innovations: How to adapt your business during pandemic – SME Myanmar
HomeEventsBusiness Model Innovations: How to adapt your business during pandemic
Thursday, April 23, 2020 at7PM – 8 PM UTC+06:30
How to adapt your business duringapandemic?
Have you noticed the fall of the traditional centralized trading system of consumer products? Because of the current pandemic, the way of buying and selling of consumer products has dramatically changed toadecentralized delivery system.
Businesses now need to be innovative. Consumers used to go to the wet markets and buy something to cook for daily meals, but now the situation has changed and the sellers have to come to individual buyers to keep their business alive. It’s just one phone call away orafew clicks in the delivery apps. Taking advantage of this change in behaviour in Myanmar, Impact Hub Yangon would like to discuss how current business models should be innovated to adapt to the situation or to get even better.
Maybe it’s time to revolutionize the traditional economy processes – by digitalising them!
Event is online and you’ll have two options to join the webinar.
1) Zoom (Interactive participation)
2) Facebook Live (View only)
Register Here – http://bit.ly/BusinessModelInnovations
ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေအတွင်းတွင် မိမိ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မည်သို့လိုက်လျောညီထွေအောင် ပြောင်းလဲပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း?
စားသုံးကုန်တွေ၏ မိရိုးဖလာလမ်းစဥ်အတိုင်းရောင်းချမှုစနစ် ကျဆင်းလာမှုကို သင် သတိထားမိပါသလား?
ယခင်ကဆိုလျှင် ရောင်းသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီသို့ ဝယ်သူအမြောက်အများမှ သွားရောက်ဝယ်ယူရပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် လက်ရှိခြိမ်းခြောက်နေသောကူးစက်ရောဂါကြောင့် ရောင်းသူမှ ဝယ်သူတစ်ဦးချင်းဆီသို့ သွားရောက်ရောင်းချရသော စနစ်သစ်ကို ပြောင်းလဲလာကြသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ စားသုံးကုန်ဝယ်ယူရောင်းချမှုလုပ်ငန်းစဥ်တွေဟာ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ တီထွင်ဆန်းသစ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေဟာဆိုရင်လည်း နေ့စဥ်ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့အတွက် စျေးအမြဲသွားနေကျရာကနေ ယခုအနေအထားကြောင့် ရောင်းသူတွေက သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆက်လက် လည်ပတ်စေဖို့အတွက် စားသုံးသူတွေဆီ ပြန်လည် အရောက်ပို့ပေးနေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါဟာဆိုရင်တော့ ဖုန်းဖြင့်မှာယူခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) အိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အက်ပလီကေးရှင်းများမှ ကိုယ်ဝယ်ချင်သော အရာများကို နှိပ်၍ မှာယူခြင်း ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲလာပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ဝယ်ယူစားသုံးသူများ၏ ဝယ်ယူမှုအကျင့်လက္ခဏာများကို ကြည်ရှုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် Impact Hub Yangon မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို လက်ခံပြီး ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် မိမိရဲ့ စီးပွားရေးမော်ဒယ်ကို မည်သို့တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိရိုးဖလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းစနစ် စတင်ပြောင်းလဲချိန်တန်လာပြီလား?
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ​အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထား​သော လင့်ခ်တွင် နာမည်စာရင်းသွင်း၍ Zoom Application မှ​ တစ်ဆင့် ဆွေး​နွေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်အ​မေးအ​ဖြေလုပ်နိုင်သလို Facebook Live မှ တစ်ဆင့်လည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲနေ့ရက် ။ ။ ဧပြီလ ၂၃ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ဆွေးနွေးပွဲအချိန် ။ ။ ည ၇ နာရီ မှ ၈ နာရီ အထိ
ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန် ဒီလင့်ခ် မှ တစ်ဆင့် နာမည်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။